Taageerayaasha maleeshiyada Iran ay taageerto ee dalka Iraq, kuwaas oo ku xoomay safaaradda Mareykanka ee Baghdad, halkaasi oo ay dhagxaan ku weerarayeen laba maalin, ayaa isaga tagay Arbacadii kadib markii Washington ay ciidamo dheeraad ah gaysay halkaas, kuna hanjabtay aargudasho ka dhan ah Tehran.
Dibad-baxayaasha oo isku dayey inay galaan safaaradda Mareykanka ee Iraq, ayaa ka carreysnaa duqeymo ay ciidamada Mareykanka la beegsadeen maleeshiyo Iran ay taageerto oo ku sugan dalalka Iraq iyo Syria, kuwaas oo lagu dilay 25 maleeshiyo.
Waxay dhagxaan ku tuurayeen dhismaha safaaradda, ayaga oo ku qasbay ciidamada Mareykanka ee sagxadda kore saaraan inay adeegsadaan sunta dadka ka ilmeysiisa, si ay ugu kala eryaan.
Inta badan dibad-baxayaasha ayaa u muuqday inay shalay gelinkii dambe isaga tageen safaaradda, kadib markii amar uu kasoo baxay maleeshiyo shiico ah, oo dibad-baxayaasha u sheegtay in farriintooda la maqlay ayna isaga tagaan safaaradda.
Militariga Iraq ayaa sheegay in dhammaan dibad-baxayaasha ay ka wada tageen safaaradda xalay.
Dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysay Iran inay mas’uul ka tahay dibad-baxayaasha weerarka ku ah safaaradda, waxayna ku cadaadisay dowladda Iraq inay sare u qaaddo ciidamada sugaya amniga safaaradda.